Jurgen Klopp Oo Sheegay In Heshiiskii Neymar Jr Uu Suuqa Kala Iibsiga Badalay Oo Hadda Ay Suurtogal Tahay In La Bixiyo Lacagta Heshiiska Lionel Messi Lagu Burburin Karo - Laacib.net
Jurgen Klopp Oo Sheegay In Heshiiskii Neymar Jr Uu Suuqa Kala Iibsiga Badalay Oo Hadda Ay Suurtogal Tahay In La Bixiyo Lacagta Heshiiska Lionel Messi Lagu Burburin Karo
by Mohamoud Batalaale | Saturday, Aug 12, 2017
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa sheegay in heshiiskii waalida ahaa ee ay Paris Saint Germain ku butburisay qandaraaskii Neymar jr ee Barcelona in uu gabi ahaanba badalay xaaladii suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Jurgen Klopp ayaa xusay in markii hore loo arkayay wax fadeexad ah in kooxihi bixiso lacagta 222 miilyan euroska ahayd ee lagu burburin karayay heshiiskii Neymar balse waxa uu xusay in hadda ay suurtogal tahay in la bixin karo lacagta heshiiska Lionel Messi lagu burburin karo.
Jurgen Klopp hadalkan sheegay xili uu si adag u joojinayo Philippe Coutinho oo doonaya in uu Barcelona ku biiro laakiin Liverpool ayaan ahayn kooxaha aaminsan in heshiiska ciyaartoyda lagu daro qodob sheegaya lacag lagu burburin karo taas oo Reds ka caawisa in ay wada xaajoodyo adag gali karto halkii ay daawan lahayd koox bixinaysa lacagta heshiiska ciyaartoy lagu burburinayo.
Jurgen Klopp oo ka hadlaya lacagaha heshiiska lagu burburiyo iyo arintii Neymar Jr ee PSG ayaa DAZN u sheegay: ” Waa wax cadaan ah, ka hor intii aynaan arkin wax kastaaba waxa uu ahaa wax aan macquul ahayn. Waxaa jira liiska lacagaha lagu burburin karo ciyaartoyda Barcelona iyada oo Leo Messi lagu burburin karo heshiiskiisa 300 milyan euros, in ka yar bil waxay u muuqataa shay suurtogal ah”.
Jurgen Klopp oo ka hadlaya ka hor heshiiskii Neymar Jr ee PSG iyo sida ay hadda wax isku badaleen ayaa yidhi: “Waxay ahaan jirtay tiro fadeexaad ah (222 milyan euros), waxay ahayd sidii wax aan la gaadhi karin. Ayaa doonaya in uu bixiyo 300 milyan eruos? Hadda waa wax si sahlan u dhici karta”.
Kooxaha Yurub ayaa hadda ka walwalsan sida xawliga ah ee uu suuqa kala iibsigu uu qaali u sii noqonayo iyada oo ay aad u badanayaan ciyaartoyda lagu qiimaynayo 100 milyan ama wax ka badan halka markii hore ay wax aad u yar ahayd ciyaartoyda qiimahan lagu tilmaami karaa.
Barcelona ayaan markii hore filayn in ay jiri karto lacag bixin kartay 222 milyan euroskii heshiiska Neymar Jr lagu burburin karayay laakiin sida uu Jurgen Klopp hadda sheegay waxaaba suurtogal ah in ay jirin karto koox bixin doonta 300 milyan euros ka heshiiska cusub ee Lionel Messi lagu burburin karo iyada oo ku xidhan kaliya in ciyaartoygu uu doonayo in uu baxo.